Fanatanjahantena 10 malaza indrindra eran-tany 2022 - Victor Mochere
Tia fanatanjahantena izao tontolo izao. Hatramin'ny taloha, ny olona dia talanjona sy nahazo aingam-panahy avy amin'ny olombelona miavaka izay afaka manao fanatanjahan-tena goavana. Manana anjara toerana lehibe eo amin’ny fiaraha-monina misy antsika ny fanatanjahantena. Ny ankizy dia mianatra fahaiza-miaina eo amin'ny sehatra / kianja, ary ny fanatanjahan-tena dia fomba iray ahafahan'ny tanàna mifamatotra, miala sasatra ny olona, ​​​​ary ny olombelona hankafy ny atletisma manta sy ny fahaiza-manaon'ireo atleta za-draharaha indrindra. Maro ny antony itiavan'ny olona ny fanatanjahantena - mahafinaritra, mampientam-po, mahasalama, tsy azo vinaniana, ary mahatonga antsika ho velona.
Ny indostrian'ny fanatanjahan-tena matihanina dia misarika mpankafy an-tapitrisany maro izay mihoby amin'ny ekipa tiany indrindra ary mivoaka an-tapitrisany izy ireo hijery azy ireo milalao mivantana. Isaky ny faran'ny herinandro, an'arivony ny mpankafy mirohotra eny an-kianja hijery ny lalaon'ny ekipa tiany indrindra, na lalao baolina kitra amin'ny Ligy Premier anglisy izany na lalao basikety ao amin'ny National Basketball Association. An-tapitrisany maro koa no mirotsaka amin'ny lalao any an-trano, ka mahatonga ny tsenan'ny fanatanjahantena matihanina ho tsenan'ny fanatanjahantena tena mampidi-bola ho an'ny fampielezam-peo sy ny mpanao dokambarotra.
Ny sasany dia manana filokana miaraka amin'ny vola mitaingina isa sy vokatra farany amin'ny lalao, fa ny hafa kosa manana fireharehana sy fiankohofana ho an'ny ekipa ilainy. Ny antony, ny fanatanjahan-tena matihanina dia iray amin'ireo indostria lehibe indrindra eran'izao tontolo izao ankehitriny, dia tranga iray izay niparitaka nanerana izao tontolo izao. Ao amin'ny indostria mihamitombo ara-barotra, mitady hanararaotra ireo anarana lehibe indrindra amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ireo marika mba hivarotana ny vokatra eny amin'ny kianja, amin'ny fahitalavitra ary amin'ny media sosialy.
Ireto ny fanatanjahantena 10 malaza indrindra eran-tany.
Baolina kitra (Baolina kitra)
Hazavao ny jiro fivarotana 4 ft sy ny endri-javatra misy azy